Tonizia: FEMEN Mpitolona nitazona fitaovam-piadina tsy nahazoan-dalana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Jolay 2013 12:50 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, বাংলা, Nederlands, Italiano, English
Nizotra nankany Kairouan, 184km ny renivohitr'i Tunis, mba hanohitra ny Ansar al-Sharia [Fikambanana Islamista mitaky ny fametrahana ny lalàna silamo ao Tonizia] izay nivoady ny hanaokongresy isan-taona ao i Amina tamin'ny 19 mey. Tsy tontosa izany kongresy izany noho ny fampiharan'ny mpitandro ny filaminana ny fandraran'ny governemanta ny famoriam-bahoaka izay heverinaho “manohintohina ny fiarovana sy ny filaminam-bahoaka”, Na izany aza anefa, dia nanomana fihetsiketsehana nokarakarainy ihany i Amina ary nanoratra an-drindrindra ny voambolana FEMEN teo amin'ny rindrin'ny tokotanim-pasana akaikin'ny moske manan-tantara Mosque an'i Uqba. Niditra an-tsehatra noho izany ny mpitandro ny filaminana ka nampiditra an'i Amina tamin'ny fiaran'ny polisy, rehefa tohina ireo mponina tao an-toerana ka nihiaka taminy hoe “Dégage” [miala].
Tsy araka izay notaterin'ny filazam-baovao maro dia tsy notoriana ho nanao fihetsika “tsy maoton” i Amina. Na izany aza anefa dia mety higadra enim-bolana am-ponja izy noho ny fitazonana tsy nahazoan-dalana ilay fitsifitra ranona dipoavatra. Nanamarika ihany koa moa ny bolongana efa nahazo loka Nawaat fa tsy nampangaina tamin'ny “faniratsiràna fasana” ity tovovavy ity hatreto, fiampangana izay mety hahatonga fitazonana am-ponja hatramin'ny roa taona araka ny lalàna famaizana toniziana.
Nitatitra [fr] izany ity mpanao gazety Frantsay Perrine Massy mipetraka any Tunis ity: